Covid -19 Namabhizinisi Azosebenza Esigabeni Sesine ukuthambisa uthaqa – Sivubela intuthuko Newspaper
‘’Imibono evela emphakathini iphikisene nokudayiswa kukagwayi
Ningizimu Africa njengoba kuqala inyanga kaMay 2020 ingena kwisigaba sesine sikathaqa ezigabeni ezinhlanu ezamenyezelwa Umengameli wezwe uMnu Cyril Rapmaphosa.Kweziwa lokhu njengemizamo yokuvula eminye imikhakha yezomnotho .Ungqongqoshe wezokubusa nokubambisana Dkt Nkosazana Dlamini Zuma uphinde wacacisa ngemigomo ekufanele ilandelwe uma sekuqala lesisigaba. UNgqongqoshe Nkosazana Dlamini Zuma uveze nemibono ebivela emphakathini mayelana nesigaba sesine sika thaqa. Okuqhame kakhulu ukungavunyelwa kokudayisa kukagwayi kusigaba 4.Lokho kusho ukuphikisana nokwamenyezwelwa uMongameli Cyril Ramaphosa.
Lezizigaba zizolokhu zibhekwa ikomidi elibizwa nge National Command Council eliholwa uMengameli Cyril Ramaphosa ngokubonisana noNgqongqoshe Dkt Zweli Mkhize Kanye noNgqongqoshe Ebrahem Patel.Ongqongqoshe esithangamini sabezindaba bakuvezile ukuthi uma isimo siba sibi kakhulu kungabuyelwa kusigaba 5 okuyisigaba esizima kakhulu.futhi uma abantu beziphatha kahle singadlulela kusigaba 3 sisuka ku sigaba 4.Konke kweziwa ngaphansi komthetho obizwa Disaster Management act 2002 (act No 57 of 2002). Sithi asibheke ukuthi imaphi lamabhizinisi avunyelwe ukusebenza kwisigaba 4 ngokomyalelo wongqongqoshe.
Amabhizinisi avumelekile nokunye kusigaba 4
Zonke izitolo zokudla zivumelekile ,sibala nama saspaza shops
Ukudla okuphekiwe kungahanjiswa kubathengi emakhaya.
Abalimi bavumelekile ukutshala baphinde badayise.
Abasebenza ngamahlathi Kanye abenza amaphepha.
Amabhange Kanye nayo yonke imikhakha esebenza ngezezimali
Izimayini nazo zivumelekile ikakhulu ezidayisa amalahle.
Abasebenza ngePosi nezokuxhumana
Amabhizinisi asebenza ngodoti ( Recycling )
Imikhakha yezobuchwepheshe – Izintolo zomakhalekhukhwini.
Izitolo ezidayisa izimpahla zengane Kanye nempahla zasebusika.
Ilapho kukhandwa khona izimoto
Umkhakha wezokwakha kodwa imisebenzi kahulumeni kuphela, e.g Bridges and Roads.
Abasebenza ezindlini kodwa behlala emsebenzini.
Ukugijima ibanga elingama Khilomitha amahlanu
Amabhasi, amakhumbi, Kanye nezimoto ezincane ezithwala abantu ngemali. Zingathutha ngazikhathi zoke, kodwa zingcine umthetho wokuhlazeka Kanye nokungangcwali ngokweqile.
Ukugibela amabhanoyi Kanye nokunye. Kuzovunyelwa kuzigaba ezilandelayo.
Akuvumelekile ukusuka kwenye province uya kwenye.Ngaphande uma kuthuthwa izimpahla noma kumayelana nomngcwabo. Kusuka mhlaka 01- 07 May 2020 asikho isidingo sokuphatha ivume uma ubuyela emsebenzini noma ubuyela ekhaya. Lemvume eyesikhashana. UNgqongqoshe Dkt Nkosazana Dlamini Zuma uxhuse ukuthi abantu bambambisane ukulwisana nalesisifo Covid- 19
UNCOME ITHEKU NGOKUQOQWA KUKADOTI
UMPHAKATHI UBONGA UMASIPALA NGOKULUNGISWA KWAMANZI